आज बाट काठमाडौंमा नयाँ नियम : गर्न हुने र नहुने गतिविधि यस्ता छन् ! सूचना पढेर मात्र बाहिर निस्किनु होला – Sandesh Press
आज बाट काठमाडौंमा नयाँ नियम : गर्न हुने र नहुने गतिविधि यस्ता छन् ! सूचना पढेर मात्र बाहिर निस्किनु होला
June 22, 2021 219
काठमाडौं उपत्यकामा आज (असार ८ गते) देखि निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएको छ। आजदेखि गतेअनुसार जोर बिजोर नम्बरका आधारमा निजी सवारीसाधन सञ्चालन खुला गरिएको हो। यस्तै विभिन्न पसल पनि बारअनुसार सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ। धेरै भीडभाड हुने र जोखिमका व्यवसाय बन्द भए पनि अरू खुला गरिएको हो।
आजदेखि एक हप्ता थप (असार १३ गतेसम्म) निषेधाज्ञा पहिलेभन्दा सहज बनाइएको हो। उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) का प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यसअघि नै संयुक्त बैठक बसेर जारी गरेको निषेधाज्ञा आजबाट लागू भएको हो।
Prevभूलेर पनि नराख्नुहोस् बच्चाको यस्तो नाम, नत्र पूरै जिन्दगी हुन्छ बदनाम
Nextसमस्यामा परेर काठमाडौं उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने यात्रुसँग तीन गुणासम्म बढी भाडा असुली
स्याङ्जामा निर्माणाधीन पुल भ-त्किँदा आठ जना घाइते